Ogaden News Agency (ONA) – Bas Siday Dad Kasoo Jeeda Masiixida Masar oo La Weeraray.
Bas Siday Dad Kasoo Jeeda Masiixida Masar oo La Weeraray.
Posted by ONA Admin	/ May 27, 2017
Koox aan haybtooda la garanaynin oo hubeysan ayaa weerar ku qaaday bas ay saarnaayeen Masiixiyiinta Qibdiga ah oo marayay gobol ku yaalla badhtamaha dalka Masar iyagoo halkaa ku dilay 26 qof, 25 kalana ku dhaawacay, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda.
Baska ayaa ku sii jeeday gobolka Minya, oo 220 KM koonfurta ka xiga caasimada Qaahiro markii rasaas ooda looga qaaday. Masiixiyiinta ayaa u socday inay ku soo cibaadeystaan kaniisad ku taalla gobolkaasi. Ma jirta koox ilaa iyo hadda sheegatay mas’uuliyadda weerarkaaasi.
Dhinaca kale kooxda la magac baxday Dowladda Islaamka (Daacish) ayaa dhowr jeer oo hore bartilmaameedsatay Masiixiyiinta Qibdiga ah waxayna wacad ku martay inay sii wadi doonto ugaadhsashadooda. Labo qarax oo ballaadhan oo ka dhacay kaniisado ku yaalla magaalooyinka Alexandria iyo Tanta bishii April ayaa waxaa ku dhintay 49 qof.
Weerar kale oo isqarxin ah oo lagu qaaday kaniisad kale oo ku taalla caasimadda bishii Desember 2016 kii ayaa waxaa lagu dilay 29 qof halka Masiixiyiintii daganaa magaalada Al-Cariisha ee waqooyiga Siinay ay isaga carareen magaaladaasi bishii February ka dib markii weerarro lagu qaaday.
Weeraradaasi ayaa ku khasbay madaxweynaha Masar, Cabdulfataax Al-Siisi, inuu dalkaasi ku soo rogo xaalad deg deg ah, wuxuuna ballan qaaday inuu raadin doono mintidiintaasi oo intooda badan fadhigoodu yahay waqooyiga Siinay.
Masiixiyiinta waa 10% dadweynaha dalkaasi Masar oo ka kooban 92 milyan oo qof. Waxay ka cabanayaan in dowladda Masar aysan qaadin tallaabooyin ay ku sugeyso ammaankooda.